Caamsaa 08, 2018
Mormii aanaa Gooroo Doolaa tti guyyaa harraa gaggeeffame
Gujii, aanaalee akka Gooroo Doolaa, Shaakkisoo fi Aannaa Sorraa, magaalaa Adoolaa-wayyuu keessatti hiriirawan mormii geggessamuu isaanii fi magaalaa Adoolaa-Wayyuu keessatti geggeessame gara hookkaraatti jiraattonnii fi aangawoonni VOA-f ibsanii jiran. Mormiin har’aa hiriiran qofa otuu hin taane, gabayaa dhaabuu fi karawwan cufuun ka geggeessame akka turellee dubbbatan.
Akka jiraattonni jedhanitti, magaalaa Adooaa-Wayyuu keessatti walitti-bu’insa qeerroo magaalattii fi poolisii Oromiyaa gidduutti uumameen, yoo xiqqaate namoonni lama du’uunii fi afur madaa’uun beekamee jira.
Bulchaan magaalaa Adoolaa-wayyuu – Obbo Caalaa Waaree garuu, namoonni humnaan dhiibanii gara buufata poolisiitti dhufuu isaaniitiin walitti-bu’insa uumame keessatti, namni ujummoolee bishaanii naannoo buufatichaa jiran keessa seenee lubbuun isaa dabruu fi namoonni lama ka biroon madaa’uu VOA-tti dubbatan. Yeroo isaan dubbatanis, dudduuba isaaniitii sagaleen dhukaasaa deddeebi’ee dhaga’amaa ture. Sababaan dhukaasichaa haala uumame irraa kan madde tahuullee Obbo Caalaa Waaree dubbatanii jiran.
Jaarsi Gumaa Araarsaa Ture Yakka Tokko Malee Akka Gaaguraatti Fannisameen Tumamaa Ture, Jedhu Hidhamaan Dhiheenya Hiikaman